लहान ९ बैशाख । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ लहानले हालै गरेको तेस्रो सगरमाथा महोत्सवको कारोबार एवं आम्दानी खर्च सार्वजनिक नहुंदा नागरिक समाज आक्रोशित भएका छन् । गत बर्ष आयोजना गरेको दोस्रो सगरमाथा महोत्सवको हिसाब हालसम्म सार्वजनिक नगर्दा संघका केही पदधिकारीहरु आलोचित हुंदै आएका छन् ।
चैत्त २७ गतेदेखि बैशाख ७ गतेसम्म संचालन भएको तेस्रो सगरमाथा महोत्सवमा दैनिक ५ हजारदेखि १० हजारसम्म प्रवेश टिकट काट्ने गरेको थियो । यसवारे उद्योग वाणिज्य संघ लहानका सदस्य विकास शारडासंग गणेश चौक एवं आन्तरिक राजस्व कार्यालय अगाडि कुरा गर्दा आज साढे सात हजार प्रवेश टिकट काटियो । तर, थप अढाई हजार डुप्लीकेट टिकट नभेटाएको भए १० हजार हुन्थ्यो ।
उता, जादुगर, मौतको कुवा, वाल उद्यानलगायत आधा दर्जन खेल प्रविधिबाट समेत उद्योग वाणिज्य संघले कमिशन (प्रतिशत) को आधार रकम असुली गरेका छन् भने अढाई सय स्टल राखिएको थियो । त्यस मध्ये करिब १ सय ८४ स्टलबाट रकम लिएको छ । एनसेलले सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि निःशुल्क सेवा दिएका थिए भने स्थानीय कलाकारहरुलाई न्यूनतम रकममा कार्यक्रम गराइएको जानकारीमा आएको छ । कार्यक्रमको लागि मेडापले ३ लाख सहयोग गरेका छन् भने पर्यटन अन्तर्गतको सरकारी निकायबाट समेत सहयोग भएको छ । १ सय ८४ स्टलमा साढे पांच करोडको कारोबार भएको संघका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् । प्रवेश टिकट दर ४० रुपैयां थियो ।
दोस्रो सगरमाथा महोत्सवपछि आवश्यक रकम मिलान गर्न संघका अधिकांश पदधिकारीहरुलाई उद्योग वाणिज्य संघ लहानका अध्यक्ष सुनिल महतोले भारत भ्रमण गराएका थिए । यसवारे अर्का सदस्य श्याम गुप्ता भन्छन्— यो साधारण कुरा हो, तेसो महोत्सवपछि थाईल्याण्ड भ्रमणकै कुरा छ । कसको के लाग्छ ?
महोत्सवमा स्थानीय उत्पादन, स्थानीय झांकी कलासंस्कृतिको प्रोत्साहन दिनुपर्ने ठाउंमा अश्लिल र पश्चिमा शैलीको नाचले स्थानीयवासी आक्रोशित भएका थिए । यसवारे कवि अर्जुन दर्दिला फेसबुकमा लेखे ‘वास्तवमा लहान उद्योग वाणिज्य संघले लगाएको मेला सगरमाथा महोत्सव हो की होइन् ?’ सगरमाथा महोत्वसको कुरा गर्दा परिभाषा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यहां सगरमाथा भनेको अंचलीय पहिचानलाई संकेत गरिएको छ र महोत्सव भनेको पहिचानको पर्व हो ।’ ‘यी ६ वटै जिल्लाको मौलिकता झल्किने सबै क्षेत्रको पहिचान के के हुन् ? यी मेलाले बताएको हुनु पथ्र्यो । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन् । न सगरमाथाको नाम राखिने गरी पहिरीने पहिरनको, नयांको कला संस्कृतिको, न यहांका कलाकारको परिचय दिने प्रदर्शनी हुन सकेको छ । यसले के बुझिन्छ भने यस उद्योग वाणिज्यको लागि पहिचानभित्र पर्ने कला, साहित्य र संस्कृतिको कुनै महत्व नै छैन् ।’
संघले गरेको महोत्सवको कारोवार र आम्दानी खर्चवारे नविन चौधरी फेसबुकमा लेख्छन् — हिसाब सार्वजनिक होस् र सहि तथ्य होस् । अर्का फेसबुक युजर सुनिल साहले ‘सबै लहानवासीले बुझ्न पाउंन आशा छन् ।’ यसैगरी फेसबुक युजर राकेश रोशन गुप्ताले भने हिसाव सार्वजनिक गर्न गराउंन ‘पूर्ण सहमत’ कुरा उठाएका छन् भने धनजय गुप्ताले थींक लहान भनेर लेखेका छन् । उता, अर्का फेसबुक युजर सत्यनारायण पंजियारले भने केही महिना पहिले विशेष साधारणसभा गरेको थियो, यसै (दोस्रो सगरमाथा महोत्सव) पैसाको लागि मात्र बोलाएको थियो । जेनरल मेम्बरलाई इन्भाइट थिएन जेनरल मेम्बर नै छैन् भने के को विशेष साधारणसभा ?’ भनी लेखेका छन् ।
उता, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानका प्रमुख सन्तबहादुर ढकालले महोत्सवको यर्थात कारोबारवको अडिट गराएर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । वास्तविक कारोबार देखाउंनुपर्छ, म सचेत छु हाम्रो निगरानी पनि भइरहेको छ, वास्तविक विवरण नगराएर सुख छैन् यो जमानामा ।’
महोत्सवको वास्तविक हिसाबको लागि यतिबेला समाजिक संजाल फेसबुकमा भाइरलको रुपमा उद्योग वाणिज्य संघ लहानसंग कारोवार एवं आम्दानी खर्चको माग भइरहेको छ ।